Incheon Asian 2014
17th Asian Games, 2014
19 September -4October, 2014, Incheon, Korea
S.NO. NAME FUNCTION SPORTS IN OUT
1 Mr. Prem Prasad Pun Athlete Archery
2 Mr. Jeet Bahadur Muktan Athlete Archery
3 Mr. Ashim Sherchan Athlete Archery
4 Mr. Ramesh Bhattachan Athlete Archery
5 Ms. Aisha Tamang Athlete Archery
6 Ms. Monica Rana Magar Athlete Archery
7 Ms. Krishna Maya Syangtan Athlete Archery
8 Ms. Renu Lama Athlete Archery
9 Mr. Tilak Ram Tharu Athlete Athletics
10 Mr .Gopi Chandra Parki Athlete Athletics
11 Mr. Hari Kumar Rimal Athlete Athletics
12 Mr. Krishna Bahadur Basnet Athlete Athletics
13 Ms. Sworupa Khadka Athlete Athletics
14 Ms. Dil Maya Karki Athlete Athletics
15 Ms .Kancchi Maya Koju Athlete Athletics
16 Ms. Keshari Chaudhari Athlete Athletics
17 Mr. Yam Sajan Sunar Athlete Athletics
18 Ms. Dil Maya Karki Athlete Athletics
19 Mr .Bikash Shrestha Athlete Badminton
20 Mr. Bishnu Katuwal Athlete Badminton
21 Mr. Jit Ratna Tamang Athlete Badminton
22 Mr.Sajan Krishna Tamrakar Athlete Badminton
23 Ms. Nangsal Tamang Athlete Badminton
24 Ms. Sara Devi Tamang Athlete Badminton
25 Ms. Sichhya Shrestha Athlete Badminton
26 Ms. Poonam Gurung Athlete Badminton
27 Ms .Sneha Shrestha Athlete Basketball
28 Ms.Nayana Shakya Athlete Basketball
29 Ms.Sadina Shrestha Athlete Basketball
30 Ms.Gyanu Gauchan Athlete Basketball
31 Ms.Preeti Tulachan Athlete Basketball
32 Ms. Luniva Singh Athlete Basketball
33 Ms. Samikchhya Neupane Athlete Basketball
34 Ms. Samachin Bista Athlete Basketball
35 Ms. Anusha Malla Athlete Basketball
36 Ms. Bhawana Lama Athlete Basketball
37 Ms. Supriya Tamang Athlete Basketball
38 Ms. Alisha Malla Athlete Basketball
39 Mr. Purna Bahadur Lama Athlete Boxing
40 Mr. Dipesh Lama Athlete Boxing
41 Mr. Ujjar Singh Thapa Athlete Boxing
42 Mr. Bikram Pariyar Athlete Boxing
43 Mr. Prem Chaudhary Athlete Boxing
44 Mr. Puran Rai Athlete Boxing
45 Mr .Bhupendra Thapa Athlete Boxing
46 Ms. Saraswati Rana Athlete Boxing
47 Ms. Minu Gurung Athlete Boxing
48 Mr. Paras Khadka Athlete Cricket
49 Mr. Gyanendra Malla Athlete Cricket
50 Mr. Subash Khakurel Athlete Cricket
51 Mr. Basant Regmi Athlete Cricket
52 Mr. Naresh Budhayer Athlete Cricket
53 Mr. Sharad Vesawkar Athlete Cricket
54 Mr. Binod Bhandari Athlete Cricket
55 Mr. Pradeep Airee Athlete Cricket
56 Mr. Bhuwan Karki Athlete Cricket
57 Mr. Sompal Kami Athlete Cricket
58 Mr. Ramnaresh Giri Athlete Cricket
59 Mr. Sagar Pun Athlete Cricket
60 Mr. Shakti Gauchan Athlete Cricket
61 Mr. Jitendra Mukhiya Athlete Cricket
62 Mr. Mehboob Alam Athlete Cricket
63 Ms. Rubina Chetry Belbashi Athlete Cricket
64 Ms. Mamta Thapa(Vice-captain) Athlete Cricket
65 Ms. Sarita Magar Athlete Cricket
66 Ms. Sita Rana Magar Athlete Cricket
67 Ms. Karuna Bhandari Athlete Cricket
68 Ms. Trishna Singh Athlete Cricket
69 Ms. Shova Ale Athlete Cricket
70 Ms. Rekha Rawal Athlete Cricket
71 Ms. Saraswoti Chaudhary Athlete Cricket
72 Ms. Kajol Shrestha Athlete Cricket
73 Ms. Nary Thapa Magar Athlete Cricket
74 Ms. Sonu Khadka Athlete Cricket
75 MS. Anjali Chand Athlete Cricket
76 Ms. Mamta Chaudhary Athlete Cricket
77 Ms. Indu Verma Athlete Cricket
78 Mr.Narayan Gopal Maharjan Athlete Cycling
79 Mr.Ajay Pandit Chhetri Athlete Cycling
80 Ms.Laxmi Magar Athlete Cycling
81 Mr.Janga Giri Athlete Fencing
82 Mr.Ram Bahadur Shahi Athlete Fencing
83 Mr. Rajendra Bahadur Shrestha Athlete Fencing
84 Mr.Omkar Singh Athlete Fencing
85 Bharat Khawas Athlete Football
86 Bimal Gharti Magar Athlete Football
87 Asim Jung Karki Athlete Football
88 Amar Dangol Athlete Football
89 Jagajeet Shrestha Athlete Football
90 Prakash Budhathoki Athlete Football
91 Sushil K.C. Athlete Football
92 Heman Gurung Athlete Football
93 Rohit Chand Athlete Football
94 Sandip Rai Athlete Football
95 Sagar Thapa Athlete Football
96 Aditya Chaudhary Athlete Football
97 Ajit Bhandari Athlete Football
98 Ranjit Dhimal Athlete Football
99 Bikram Lama Athlete Football
100 Alan Neupane Athlete Football
101 Bikesh Kuthu Athlete Football
102 Dinesh Thapa Magar Athlete Football
103 Shyam Nepali Athlete Football
104 Rabin Shrestha Athlete Football
105 Mr. Bishnu Prasad Sharma Athlete Golf
106 Mr. Dinesh Prajapati Athlete Golf
107 Mr. Tanka Bahadur Karki Athlete Golf
108 Mr. Tashi Tshering Athlete Golf
109 Mr. Kabin Raj Shrestha Athlete Gymnastics
110 Mr. Nishan Simkhada Athlete Gymnastics
111 Mr. Ramesh Magar Athlete Judo
112 Mr. Rajan Joshi Athlete Judo
113 Mr. Saroj Maharjan Athlete Judo
114 Mr. Shree Ram Makaju Athlete Judo
115 Ms. Devika Khadka Athlete Judo
116 Ms. Phupu Lamu Khatri Athlete Judo
117 Ms. Sunita Bohara Athlete Judo
118 Mr. Anil Gurung Athlete Sepaktakraw
119 Mr. Alen Gurung Athlete Sepaktakraw
120 Mr. Aman Pode Athlete Sepaktakraw
121 Mr. Rupesh Sunar Athlete Sepaktakraw
122 Mr. Keevi Pun Athlete Shooting
123 Ms. Sneh Rajya Laxmi Rana Athlete Shooting
124 Ms. Asmiat Rai Athlete Shooting
125 Ms. Phool Maya Kyapchhaki Athlete Shooting
126 Mr. Sirish Gurung Athlete Swimming
127 Mr. Miraj Prajapati Athlete Swimming
128 Ms. Sofia Gdegaard Shah Athlete Swimming
129 Ms. Sonira Bista Athlete Swimming
130 Mr. Jeetendra Pariyar Athlete Tennis
131 Mr. Abhishek Bastola Athlete Tennis
132 Mr. Santosh Khatri Athlete Tennis
133 Mr. Samrakshyan Bhushan Bajracharya Athlete Tennis
134 Mr. Dawa Sonam Sherpa Athlete Tennis
135 Mr. Sakchham Karki Athlete Tennis
136 Ms. Mahika Rana Athlete Tennis
137 Ms. Bibhuti Karki Athlete Tennis
138 Ms. Mayanka Rana Athlete Tennis
139 Ms. Anne Mathema Athlete Tennis
140 Ms. Bijisha Shrestha Athlete Tennis
141 Ms. Ira M. Rawot Athlete Tennis
142 Mr. Ajay Suwal Athlete Table Tennis
143 Mr. Purushottam Bajarcharya Athlete Table Tennis
144 Mr. Shiva Sundar Gothe Athlete Table Tennis
145 Mr. Amar Lal Malla Athlete Table Tennis
146 Mr. Deep Saun Athlete Table Tennis
147 Ms. Rita Prajapati Athlete Table Tennis
148 Ms. Nabita Shrestha Athlete Table Tennis
149 Ms. Rabina Maharjan Athlete Table Tennis
150 Ms. Elina Maharjan Athlete Table Tennis
151 Ms. Kajol Rauniyar Athlete Table Tennis
152 Mr. Basanta Tharu Athlete Triathlon
153 Mr. Rudra Bahadur Katuwal Athlete Triathlon
154 Ms. Yam Kumari Ghale Athlete Triathlon
155 Ms. Keshari Thapa Magar Athlete Triathlon
156 Mr. Kamal Bahadur Bhandari Athlete Soft Tennis
157 Mr. Manoj Subba Athlete Soft Tennis
158 Mr. Sohan Dhaubadel Athlete Soft Tennis
159 Mr. Ujjol Sthapit Athlete Soft Tennis
160 Mr. Shakti Sharma Athlete Soft Tennis
161 Ms. Neeru Kayastha Athlete Soft Tennis
162 Ms. Eliza Ranjit Athlete Soft Tennis
163 Ms. Nira Kayastha Athlete Soft Tennis
164 Ms. Chandramaya Rai Athlete Soft Tennis
165 Ms. Rekha Tuladhar Athlete Soft Tennis
166 Mr. Kamal Bahadur Adhikari Athlete Weightlifting
167 Mr. Bikash Thapa Athlete Weightlifting
168 Mr. Gopal Bahadur Shrestha Athlete Weightlifting
169 Ms. Tara Pun Athlete Weightlifting
170 Mr. Ang Babu Lama Athlete Wushu
171 Mr. Amar Sunar Athlete Wushu
172 Mr. Sombir Tamang Athlete Wushu
173 Mr. Sunny Shrestha Athlete Wushu
174 Mr. Dhanbir Maharjan Athlete Wushu
175 Mr. Nirajan Ale Magar Athlete Wushu
176 Ms. Jharana Gurung Athlete Wushu
177 Ms. Chahana Bomjan Athlete Wushu
178 Ms. Oshin Rai Athlete Wushu
179 Ms. Susmita Tamang Athlete Wushu
180 Ms. Sabita Rai Athlete Wushu
181 Mr. Rinji Sherpa Athlete Wushu
182 Mr. Mangal Prasad Tharu Athlete Wushu
183 Mr. Ranjan Shrestha Athlete Taekwondo
184 Mr. Arun Adhikari Athlete Taekwondo
185 Mr. Dan Baahdur Airie Athlete Taekwondo
186 Mr. Mahamad Wesh Athlete Taekwondo
187 Mr. Sujan Joshi Athlete Taekwondo
188 Mr. Shaksham Karki Athlete Taekwondo
189 Ms. Manita Sah Athlete Taekwondo
190 Ms. Nisha Rawal Athlete Taekwondo
191 Ms. Gyani Chunara Athlete Taekwondo
192 Ms. Ayasha Shakya Athlete Taekwondo
193 Ms. Neema Gurung Athlete Taekwondo
194 Mr. Anu Adhkari Athlete Karate
195 Ms. Anupama Magar Athlete Karate
196 Ms. Bimala Tamang Athlete Karate
197 Mr. Malika Chhetri Athlete Karate
198 Mr. Diwas Shrestha Athlete Karate
199 Mr. Mukunda Maharjan Athlete Karate
200 Mr. Pasrshu Ram Bastola Athlete Karate
201 Mr. Bijay Lama Athlete Karate
202 Mr. Nim Bahadur Magar Athlete Canoeing
उसुमा झरना क्वार्टरफाइनलमा
दक्षिण कोरियाको इन्छनमा जारी सत्रौं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत उसुमा झरना गुरुङ्ग क्वार्टरफाइनलमा पुगेकी छिन् । प्रिक्वार्टरफाइनलमा ६० किलो तौल समूहमा झरनाले तुर्कमेनिस्तानकी खेलाडीलाई २÷० ले पराजित गर्दै अन्तिम आठमा ठाउँ पक्का गरेकी हुन् ।
पुरुष ६० किलो तौल समूहमा मंगलप्रसाद थारु भने पहिलो खेलबाटै बाहिरिएका छन् । थारु भारतीय खेलाडी नरेन्द्र गेरेवालसंग २÷० ले पराजित भए ।
पुरुष छाङ्छुवानको फाइनलमा भने नेपाल पुछारमा रह्यो ।
नेपालबाट पदकको आशा गरिएकी चाहना बमजनले आइतबार खेल्दैछिन् ।
तेक्वान्दो खेलाडी सक्षमको अवस्था सामान्य बन्दै,इन्छन
दक्षिण कोरियाको इन्छनमा सुरु भएको सत्रौं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिनु पूर्व नै तेक्वान्दो खेलाडी सक्षम कार्की घाइते भएका छन् । तीन साता अगाडि दक्षिण कोरियामा अभ्यासरत सक्षम गत बिहीबार अभ्यासकै क्रममा घाइते भएका हुन् । अण्डकोषमा चोट लागेपछि उनको बिहीबारै शल्यक्रिया गरिएको छ । शल्यक्रिया भएसंगै ७४ किलो समूहका सक्षम प्रतियोगिता भने खेल्न नसक्ने भएका छन् ।
डाक्टर ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले विरामीसंग भेट गरेसंगै अवस्था सामान्य रहेको जनाएका छन् । कोरियाली भाषा समस्या र आज शनिबार परेकाले नेपाली चिकित्सकीय टोलीले शल्यक्रिया गरेको चिकित्सकसंग भेट नभएकाले पूर्ण विवरण पत्ता लगाउन नसकेको जनाए । चिकित्सकहरुसंग सोमबारमात्र विस्तृत विवरण लिन सकिने चिकित्सक शाहले बताए ।
नेपाली टिमका प्रमुख चिकित्सक सरोजकृष्ण श्रेष्ठले अब सोमबारमात्रै विरामी सक्षमका बारेमा विस्तृत बताउने जनाए । उनी केही दिन अझै अस्पतालमै रहने चिकित्सक श्रेष्ठले बताए ।
सेपाक्ताक्रोमा नेपालको संयमित प्रदर्शन,इन्छन
एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक सहभागीता जनाएको नेपालको सेपाक्ताक्रो खेलले संयमित प्रदर्शन गरेको छ । आज भएको डबलतर्फको पहिलो खेलमा नेपाल सिंगापुरसंग २÷० ले पराजित भयो । नेपाल २१÷१४ र २१÷७ ले पराजित भयो । नेपालबाट अनिल गुरुङ्ग र अमन पोडेले खेलेका थिए । दोस्रो खेलमा नेपाल जापानसंग पनि पराजित भयो । नेपालबाट खेलेका कप्तान अनिल र रुपेश सुनार २१÷७ र २१÷७ ले पराजित भए । समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि दक्षिण कोरियाको सामना गर्नेछ । एलन गुरुङ्ग भने घाइते भएका कारण दक्षिण कोरिया आउन पाएनन् । एलन नआएकै कारण नेपालले डबलमा मात्र खेल्न पाएको हो । सेपाक्ताक्रोको रेगु र टिममा नेपालले भाग लिन पाएन ।
इन्छन एसियाडमा पुरुष ब्याडमिन्टनमा नेपालको ठोस सुरुवात ः पहिलो पटक क्वार्टरफाइनलमा
इन्छन, दक्षिण कोरिया । असोज ४ ।
दक्षिण कोरियाको इन्छनमा जारी सत्रौं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत ब्याडमिन्टनको पुरुष टिम ईभेन्टमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ । नेपाली टिमले मकाउ चाइनालाई हराउँदै क्वार्टरफाइनलमा ठाउँ बनाएको छ । एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक अन्तिम आठमा पुग्ने क्रममा नेपाल ३÷० ले विजयी भएको हो । खेलमा रत्नजित तामाङले चि वाई वानलाई २१÷१२ ं २१—१६ ले पराजित गरे । त्यसैगरी विकास श्रेष्ठले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उ लिउङ्ग इकलाई २१÷११ र २१÷१६ ले हराए । साथै साजनकृष्ण ताम्राकारले होक मान लोउमाथि १२ ÷२१, २१÷४ र २१÷१८ को संघर्षपूर्ण जित निकाल्दै नेपाललाई अन्तिम आठमा पु¥याए ।
अन्तिम आठमा पुगेसंगै खेलाडीहरुले आफ्नो भन्दा राम्रो टिमलाई हराउन सकेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् । ब्याडमिन्टनको सशक्त टिमलाई हराएसंगै खेलाडीहरुले मनोवल बढेको प्रतिक्रिया दिए । त्यसैगरी मुख्य प्रशिक्षक रजनी जोशीले खेलाडीहरुले सोचे अनुसारको प्रदर्शन गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । प्रशिक्षक किरण थापाले पहिलो पटक टिम लिएर अन्तिम आठमा पुग्न सक्नु नै निकै खुसीको कुरा भएको बताए ।
नेपालले भोलि मलेसियाको सामना गर्दैछ । नेपाल ब्याडमिन्टन संघका महासचिव रामजीबहादुर श्रेष्ठले मलेसिया विश्वकै सशक्त टिम भए पनि रत्नजित, विकास, साजन र विष्णु कटुवालले चमत्कार देखाएर सेमिफाइनलमा पु¥याउने विश्वास लिएका छन् । नेपाली टिम १८ महिनादेखि निरन्तर प्रशिक्षणमा रहेको दावी गर्दै श्रेष्ठले यसपटकको टिम सशक्त रहेको पनि बताए । रत्नजितले भोलि विश्व नम्बर एक खेलाडी लि चोङ्ग वेको सामना गर्नेछन् ।
यसैबीच, ब्याडमिन्टनको महिला टिमले भने सोचे अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेन ।
जुडोमा नेपालको खराव प्रदर्शन इन्छन, दक्षिण कोरिया
सत्रौं इन्छन एसियाली खेलकुदमा नेपालले खराव सुरुवात गरेको छ । पहिलो दिनमै तीन नेपाली खेलाडीले बिर्सनयोग्य प्रदर्शन गरे । ६० किलो तौल समूहको पुरुषतर्फ सरोज महर्जन पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् । एक मिनेट ४९ सकेन्डमात्र टिक्न सकेका सरोज इप्पोनका आधारमा कोरियाली खेलाडी चुङ्योक किमसंग पराजित भए ।
त्यसैगरी ६६ किलो तौल समूहमा रमेश मगर मंगोलियन खेलाडी तुमुर्खुलेग दावादोर्जसंग इप्पोनकै आधारमा पराजित भए । उनी एक मिनेट ४१ सेकेन्डमात्र टिक्न सकेका थिए ।
५२ किलो तौल समूहमा देविका खड्का मात्र १३ सेकेन्ड टिकेर बाहिरिइन् । उनलाई भारतीय खेलाडी कल्पनादेवी थौदामले सजिलै अयोग्य घोषित गरेकी थिइन् ।
फेन्सिङ्गमा नेपालको सामान्य प्रदर्शन
दक्षिण कोरियाको इन्छनमा जारी एसियाली खेलकुदको फेन्सिङ्गमा नेपालले सामान्य प्रदर्शन गरेको छ । पहिलो पटक एसियाडमा भाग लिए पनि नेपाली खेलाडीहरुले संयमित प्रदर्शन गरेका हुन् । गंगा गिरी कुवेती खेलाडीसंग ५÷२ ले पराजित भए । त्यसैगरी गंगा सिंगापुरका खेलाडीसंग ४÷० ले, मंगोलियाका खेलाडीसंग ५÷२ ले, कोरियाली खेलाडीसंग ५÷० ले तथा मकाउ चाइनासंग ५÷१ ले हारे । अर्का खेलाडी ओमकार सिंह हङ्गकङ्ग चाइनाका खेलाडीसंग ५÷२ ले पराजित भए ।
नेपाली बास्केटबल उँभो लाग्ने संकेत÷इन्छन बास्केटबल संघसंग सम्झौता ।
नेपाल बास्केटबल संघ र दक्षिण कोरियाको इन्छन बास्केटबल संघबीच मैत्रिपूर्ण साझेदारीका लागि सहमति बनेको छ । नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पा र इन्छन बास्केटबल संघका अध्यक्ष इन्दुक काङबीच आइतबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार इन्छनले नेपाली बास्केटबल टिमको प्राविधिक र प्रशिक्षण पक्षमा सघाउने छ । त्यसैगरी नेपाल र इन्छनबीच मैत्रिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नेसमेत सहमति भएको छ । सो अनुसार नेपाली टिम दक्षिण कोरिया आउने छ भने दक्षिण कोरियाली टिमले नेपालमा खेल्नेछ ।
नेपाली टिमलाई सघाउने बारेमा थप आन्तरिक छलफलपछिमात्र विस्तृत खुलाउने इन्छन अध्यक्ष काङले जनाएका छन् । इन्छनसंगको सम्झौताले नेपाली महिला, पुरुष र उमेर समूहको बास्केटबलमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौता दिगो भए नेपाली खेलाडीहरु कोरिया आएर खेल्नेछन् भने कोरियाकै प्रशिक्षकले नेपालमा आएरसमेत प्रशिक्षण दिनेछन् । इन्छनले प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिनेबारेमा समेत सकारात्मक रहेको जनाएको छ । नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष शेर्पाले यो सम्झौताले नेपाली बास्केटबलको विकासमा थप टेवा पुग्ने बताएका छन् ।
एसियाडमा पहिलो पटक सहभागीता जनाएको महिला बास्केटलबल टिमले इन्छन एसियाडमा मंगोलियामाथि ७७÷४२ को सम्मानजनक हार ब्यहोरेको थियो भने समूह चरणबाटै बाहिरिने क्रममा काजखस्तान र हङ्गकङ्गसंगसमेत हार खाएको थियो । नेपालले कतारबाट भने वाकओभर पाएको थियो ।